Murume nemudzimai apfuura, shamwari yakandipa zita uye foni nhamba uye akati kuti shamwari yake yakanga achitarisira ini kudana uye kubvunza naye panze. Ndakafunga imwe Outdoor kutamba yaizova kunonakidza rokutanga musi. Isu Zvaizoda kupikiniki, dende rewaini, gumbeze uye vanakidzwe yakanaka manheru yezhizha pamwe chete. Ndakanga rworudyi pamusoro zvose izvi.
Izvi zuva bofu zvakaitika kuti rienderane neni puppy agere ane -yevedza 10 vhiki yekare Golden retriever. Ndakafunga kuti izvi zvaizoita chete kuwedzera zuva saka ndauya naye. pachinzvimbo, mafaro shoma shamwari yake inomubatsira wangu akazopedzisira ava kutikanganisa. Heano zvitatu zvikonzero kusamborerutsa puppy yenyu musi wokutanga:
1. The puppy ndivo yakawanda nzeve iyo akambomiswa yedu kukurukura
Takanga vasingatongosviki chaizvoizvo kupinda mumwe. Puppies, kana dzinovaraidza zvavo, vari kukurukura kukuru Mutange, asi kuti zvaireva kuti munhu wose aida kubvunza sei akwegura akanga.
2.Nekuti ndaiva puppy kwete yakwegura imbwa, iye zvaida uchizvichenjerera
Izvi zvaireva kuti taiva zvakawanda babysitters rembwa pane vaviri musi ane shamwari rechitatu tagging pamwe.
3.Puppy Poo haisiri chinhu aphrodisiac
Kana uine yakwegura imbwa, ari potty hwatsvuka zvichaitika zvishoma kazhinji uye une zvishoma kudzora apo uye kupi izvi zvichiitika.
Panoperera usiku, Chaizvoizvo handina sokuti ndaiva zvakawanda mukana kuziva zuva rangu. Kubva akatakura imbwa (sezvo akanga asina akadzidza kufamba pamusoro leash asi) nokupukuta muchimutevera kuzogamuchira sei akwegura akanga ana mazana vaeni vanofarira, Ndakanzwa sokuti ndakanga achishandira zvose usiku pane nokuzivana yakanaka musikana. Pakanga pasina musi wechipiri, asi ndakadzidza chidzidzo chinokosha. Siya puppy pamba kuti zuva rokutanga.